आज काग तिहार : यस्तो छ धार्मिक मान्यता | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more आज काग तिहार : यस्तो छ धार्मिक मान्यता
January 28, Tue
आज काग तिहार : यस्तो छ धार्मिक मान्यता
कात्तिक ९ गते, २०७६ - ०९:४८
काठमाडाैं। हिन्दू धर्मावलम्बीहरुले हर्षोल्लासपूर्ण रुपमा मनाउने तिहारको आफ्नै विशेषता रहेको छ । उज्यालो र खुसीयालीको पर्वको रुपमा यसलाइ चिनिन्छ।
तिहारको कुरा गर्ना साथै हाम्रो दिमागमा झिलिमिली बत्तिहरुको प्रकाश, घरआँगनमा फूलेका मखमली र सयपत्री जस्ता रङ्गी बिरङ्गी फूलहरु, देउसीभैलो टोलीको रमाइलो नाचगानको साथै सेलरोटी लगायत विभिन्न मिठाईहरुको स्वाद आइहाल्छ । तर, तिहारपर्वको साँस्कृतिक महत्वमात्रै होइन धार्मिक महत्वपनि धेरै ठूलो रहेको छ । यमपञ्चक समेत भनिने तिहारको पाँच दिनमा क्रमैसँग काग, कुकुर, गाई, गोरु र आफ्ना दाजुभाईको पूजा गरिन्छ ।
तिहार पर्व कात्तिक कृष्ण त्रयोदशी देखि कात्तिक शुल्क द्वितीया तिथिसम्म गरि पाँच दिन मनाइन्छ । यसको सुरुवात कात्तिक कृष्ण त्रयोदशीको दिन मनाइने काग तिहारबाट हुन्छ ।
हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको अर्को महान पर्व बडादशैं सकिएको लगभग दुई सातापछि नै आउने तिहारको पहिलो दिनमा यमराजको दूत कागको पूजा गरिन्छ । काग तिहारको दिनमा यमराजको सन्देश वाहकको रुपमा कागलाई सम्मानको साथ पूजाआजा गरेर खानेकुरा दिने चलन रहेको छ ।
हाम्रो नेपाली समाजमा कागलाई सन्देश वाहक प्राणीको रुपमा लिइन्छ । अझै पनि गाँउघरमा आफ्नो घर अगाडि आएर काग करायो भने केही सन्देश ल्याएको वा घरमा पाहुना आउने जानकारीको दिएको मानिन्छ ।कागले विशेषगरी अशुभ सन्देश छिटो ल्याउने जनविश्वास रहेको छ । त्यसैले अझै पनि आफ्नो घरआँगनमा आएर काग कराउन थाल्यो भने राम्रो खबर सुनाओस् भनेर ‘सुबोल‘ सुबोल‘’ अर्थात शुभ बोल भनेर भनिन्छ ।
हिन्दू धर्मशास्त्रका अनुसार यमलोकका अधिपति यमराजले पृथ्वी लोकका मानिसहरुको जन्म मृत्युको विवरण राख्ने गर्दछन् । त्यस्तो विवरण पृथ्वीलोकमा ल्याउने र लैजाने काम भने कागले गर्छ भन्ने धार्मिक मान्यता रहेको छ ।
आकाशबाट उडेर छिटो सन्देश ल्याउन लैजान सक्ने भएकाले यमराजले कागलाई आफ्नो दूत बनाएको धार्मिक विश्वास रहेको छ । त्यसैले काग तिहारको दिनमा कागलाई पूजाआजा गरेर मिठो खानेकुरा खान दिएमा यसले वर्षभरि आफ्नो घरमा दुःखद सन्देश ल्याँउदैन भन्ने विश्वास रहेको छ ।
यस्तै काग तिहारको दिन कागको पूजाआजा नगरेमा पापको भागी भइन्छ र मृत्युपछि नर्कमा पुगिन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ । त्यसैले कागतिहारमा कागलाई घरआँगनमा बोलाई घरमा बनेका खाद्यान्न परिकार खान दिइन्छ ।
यस दिनमा विहानैदेखि कागको पूजा गरिन्छ, घरवाहिर पात या दुना टपरीमा विभिन्न खाना राखेर कागलाई खान दिइन्छ । कागको पूजाआजा गर्दै आँउदो वर्षभरि कागले आफ्नो घरआगनमा राम्रो र सुखद खबरमात्रै ल्याओस भनेर कामना गरिन्छ ।
त्यस्तै प्रकृतिको लागि पनि काग एउटा नभई नहुने पन्छी हो । यसले हाम्रो ‘इकोसिस्टम’मा पनि ठूलो योगदान दिन्छ । हामीले लगाएको बालीनालीलाई हानी गर्ने किरा फट्याङ्ग्राहरुलाई खाइदिएर कागले अन्न उत्पादन बढाउन सहयोग गर्छ ।
यसले पर्यावरण स्वच्छ राख्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ । मानवसभ्यता र प्रकृतिसँग जोडिएको पन्छी कागको पूजा गर्नुलाई मानिसले प्रकृतिमा रहेका जीवजन्तुलाई गर्ने प्रेम र सम्मानको रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।
कात्तिक ९ गते, २०७६ - ०९:४८ मा प्रकाशित
निर्बिरोध निर्बाचित सभामुखको नालीबेली –स्कुलदेखि संसदको हेडमास्टरसम्म
काठमाडौं । बिभिन्न बाधा र अड्चनबीच अन्ततः प्रतिनिधिसभाको नयाँ सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटाले...
नेपाल एयरलाइन्सका दुई दर्जन पाइलटद्वरा सामुहिक राजीनामाको चेतावनी
काठमाडौं । सरकारको पूर्ण स्वमित्व रहेको नेपाल एयरलाईन्सका दुई दर्जन पाइलटहरुले सामुहिक राजनीनामाको...
साँखुकाे ४०० वर्ष पुरानो ज्योतिलिङ्गेश्वर महादेवको मूर्ति चोरी
सपथग्रहण लगत्तै सभामुख सापकोटा र चिनियाँ राजदूतबीच भेट, के भयो कुुराकानी ?
सानेपामा सभापति देउवालाई रोक्न खोजेपछि काँग्रेसका दुई पक्षबीच झडप
शोषणमा परेका समुदायलाई अगाडि नल्याएसम्म समानताको कुरा भ्रम मात्र : अध्यक्ष प्रचण्ड
गायिका आस्था राउतलाई ४ दिन हिरासतमा रहने
सभामुखमा निर्वाचित भएपछि सापकोटाले भने – मुद्दाको विषयमा बोल्न बाध्य नपार्नुहोला !
नवनिर्वाचित सभामुख सापकोटाले लिए शपथ (फाेटाेफिचर)
अग्नी सापकोटाविरुद्धको रिटमाथी न्यायाधीश सपना प्रधानले सुनुवाई गर्ने
गायिका आस्था राउतले गरिन् प्रहरीसमक्ष ‘आत्मसमर्पण’
श्रीमतीलाई पेट्रोल छर्केर जिउँदै जलाए
काँग्रेस नेकपासँग कमन्डलु लिएर उपसभामुख माग्न जाँदैन : नेता रिजाल
सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटा निर्वाचित